Ubalisa 'ngobutsotsi' bukanompempe umqeqeshi weDowns - Impempe
Ubalisa ‘ngobutsotsi’ bukanompempe umqeqeshi weDowns
February 15, 2022 February 15, 2022 Impempe.com
Ukhale ngezinqumo zikanompempe umqeqeshi weMamelodi Sundowns, uManqoba Mngqithi, ngemuva kokuthi bebambane neBaroka FC ngo 1-1 emdlalweni weDStv Premiership, ngoMsombuluko.
ISundowns ibihamba phambili ngo 1-0 e-Old Peter Mokaba Stadium, sekusele imizuzwana ukuthi kuphele umdlalo kodwa iBaroka yashaya igoli ekugcineni.
Kukho konke akhala ngakho uMngqithi ubona ukuthi u-Andile Jali udlaliswe kabi sekuzophela umdlalo, ngakho bekumele banikwe ifree kick kunokuthi ibhola linikwe iBaroka.
“Yibhola ke lelo, ngesinye isikhathi ubona izinto ongakaze ucabange ukuthi uzozibona,” kusho uMngqithi ngemuva komdlalo.
“URushine (de Reuck) nomdlali wabo bagxumile bebanga ibhola. URush wathola ikhadi eliphuzi, waphumela ngaphandle. Abazange balashwe bobabili kodwa uRushine kumele aphumele ngaphandle umdlali wezimbangi aqhubeke abe senkundleni.”
FUNDA NALA: UDolly ujabulele ukuthi bazosheshe bakhohlwe abakugilwe yiTS Galaxy
Kulo mdlalo uLyle Lakay ushaye enhle ifree kick kusanda kuqala isiwombe sesibili iDowns yahamba phambili ngo 1-0. Bese izitshela ukuthi ihambe nawo wonke amaphuzu iSundowns ngesikhathi uRichard Mbulu eshaya elihle igoli ngomzuzu wokugcina ngci.
“Esigamekweni sesibili u-AJ (Andile Jali) udlaliswe kabi eshaywa ngendololwane. Esikhundleni sokuthi unompempe asinike ifree kick, ibhola ulinike izimbangi. Lokho kuyamangaza kakhulu kodwa noma kunjalo basicindezele kakhulu ngesiwombe sesibili,” kubeka uMngqithi.
Womabili amaqembu abenethuba lokuwuwina umdlalo uma kubhekwa amathuba awatholile. ULakay ushaye ipali kathathu u-Elvis Chipezeze esesele, kanti uBasel Mphahlele bekumele ayibeka phambili iBaroka kodwa wayigeja iphenathi.
Unompempe obephethe umdlalo nguXola Saleta ophume enkundleni esemenyezwa kabuhlungu abeSundowns bethu “uyisela wena”, bezwakala kwithelevishini. Lokhu kungase kubadonsele ulaka lwePremier Soccer League (PSL).
Previous Previous post: IBaroka iphuce iSundowns seyiwaphethe ngesandla amaphuzu
Next Next post: UDolly ujatshuliswa wumdlalo olandelayo obazibisa ihlazo abaphuma kulo